चुनावको मुखमा यस्तो पत्र लेखेर काँग्रेस गठबन्धनबाट पनि बाहिरिए बाबुराम ! (पत्रसहित)
ARCHIVE » चुनावको मुखमा यस्तो पत्र लेखेर काँग्रेस गठबन्धनबाट पनि बाहिरिए बाबुराम ! (पत्रसहित)
काठमाडौँ - बाम गठबन्धनबाट अलगिएका बाबुराम भट्टराइ काँग्रेस गठबन्धनबाट अलग भएका छन् । गोरखा २ बाट उम्मेदवार बनेका भट्टराई दोस्रो चरणको निर्वाचन आउन २ दिन बाकी रहँदा छि आफू लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट अलग भएको आसयको पत्र मतदातामाझ पुर्याएका हुन् ।
‘परम्परागत ‘साम्यवादी र पुँजीवादी धारलाई चुनौति दिन संसदभित्र वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको एक तेस्रो धारको उपस्थिति आजको ऐतिहासिक आवस्यकता हो।’ उनले १४ मंसिरमा लेखेको पत्रमा भनिएको छ । यसले बाबुराम लोकतान्त्रिक गठबन्धन छाडेर तेस्रो धार निर्माणमा लागेका छन् भन्ने संकेत दएको छ ।